The iQOO Neo3 ga-abụ ọnụ ala Snapdragon mobile niile | Gam akporosis
Ọ bụ ezie na anyị ka na-eche ọbịbịa nke smartphone na Snapdragon 865 Site na iQOO, sub-brand nke Vivo, anyị nwere nkọwa ọhụụ nke metụtara ọnụahịa nke ekwentị mkpanaaka a na-echere ogologo oge.
Anyị na nso nso a zutere ụbọchị mwepụta nke ngwaọrụ a, nke na-abụghị ndị ọzọ karịa iQOO Neo3. The Chinese emeputa tọhapụrụ ya n'okpuru ihe na-akpali isiokwu, nke na-enwe mmetụta Nintendo ama Animal ịgafe video usoro. Na ajụjụ, ọ bụ Eprel 23 ụbọchị a ga-ewepụta ya ma bupụta ya n'ahịa n'ụdị ya na nkọwa niile nke nkọwapụta teknụzụ ya, njirimara ya na ihe ndị ọzọ.
Dabere na ọkwa ọhụụ ọhụrụ na Weibo, ekwentị ahụ ga-ebido ire ihe dị ka yuan 2,998, nke ruru ihe dịka Euro 390 ma ọ bụ 430 dollar na mgbanwe mgbanwe. Nke a ga - eme ka ọ bụrụ ọnụ ahịa Snapdragon 865 kachasị ọnụ ahịa na ahịa, yabụ anyị na - atụ anya ị nweta ọganiihu ahịa dị nso.
The iQOO Neo3 ga-abụ ihe ọ bụla karịa a trimmed version nke iQOO 3 mbụ Agbanyeghị, ọ ga-abata na Qualcomm Snapdragon 865 ahụ ekwuru, ihe ikpo okwu octa-core nwere isi agglomeration: 1x Cortex-A77 na 2.84 GHz + 3x Cortex-A77 na 2.42 GHz + 4x Cortex-A55 na 1.8 GHz.
IQOO Neo3 Leaked Ọnụ Ahịa
Ngwaọrụ ahụ ga-egosipụtakwa ụdị egwuregwu dị iche iche na sistemụ jụrụ oyi nke ga-ahụ na ahụmịhe egwuregwu na-enweghị atụ. Ihe ga - eme ka ọ pụta ìhè, na mgbakwunye na ọnụahịa akụ na ụba ọ ga - ere, bụ nke ya 144Hz gosipụta ọnụego ume ọhụrụ; nke a ga-adabara ya na ohuru ohuru Red Magic 3 5G, nke dị ugbu a naanị mkpanaka nwere ogwe 144 Hz. Ọ ga-abụrịrị ebe na-ere ahịa kachasị mma nke ngwaọrụ a, ọ kachasị n'ihi ọnụahịa a ga-enye ya, nke ga-adị n'etiti etiti ekwentị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » IQOO Neo3 ga - abụ ekwentị dị ọnụ ala karịa Snapdragon niile
Nyere dino Dungeon dinosaur aka igafe otutu ulo mkporo